Madaxweyne Deni oo booqanaya Magaalooyin ka mid ah Puntland
07 August, 2019 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa in uu booqasho ku tago magaala Xeebeedka taariikhiga ah ee Eyl oo kutaal Koonfurta Bari ee gobolka Nugaal iyo Magalada Khardho ee Gobolka Karkaar.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in u jeedka booqashada Madaxweyne Deni ee Magaalada Eyl ay tahay sidii uu ugu kuurgeli lahaa xaalada degmnadaas iyo sidii uu xariga uga jari lahaa wadada isku xirta Dangorayo iyo Eyl oo dib u dhis lagu sameeyay.
Sidoo kale warar waxaa la sheegay in uu Madaxweyne Deni uu xariga uga jari lahaa makatabadda Buugaagta ee degamda Eyl iyo Xarumo kale,sida ay sheegeen mas’uuliyiin ka tirsan Puntland.
Waxaa Magaalada Eyl ee Gobolka Nugaal ayaa waxaa haatan ka socda diyaar garoow ay wadaan taliska Ciidamada PMPF ee degmada, taliska ciidanka degmada iyo waxgaradka, iyaga oo ka arrinsanaya qaban qaabada soo dhoweynta madaxweyne Denni.
Sidoo kale wararka kale ayaa waxaa ay sheegayaan in Madaxweynaha Puntland uu booqan doono Magaalada Khardho ee xarunta gobolka Karkaar, hayeeshee warar aan faah faahsan laga heyn booqashadaas.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa tan iyo markii la doortay waxaa uu booqday Magaalooyin Boosaaso iyo Gaalkacyo ee Gobolada Bari iyo Mudug.